Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yokuqala) – iAfrika
Izimbiza, ubulawu kanye nezintelezi ngamakhambi asetshenziswa esiZulwini ukwelapha. Lapha ke sizokwenaba kancane ngomehluko phakathi kwentelezi, imbiza kanye nobulawu.
Imbiza wumuthi wokuchatha onamandla okubutha uphinde ukhuculule izinsila esiswini, esinyeni, nasezinsweni uhlanze ingaphakathi lomuntu. Imbiza isebenza kahle nakwabadala abaphathwa yiqolo nakwebisafazane abangemukeli izisu.
Intelezi umuthi wokuchela, lomuthi uyathakwa bese ufakwa noma ugcinwe okhambeni endlini engenhla. Kuthi kusihlwa usokhaya athathe umshanelo aphume achele ngawo umuzi wonke. Uma enza lokho usuke evikela amalumbo, imibhulelo emibi noma imeqo ukuba ingangeni ekhaya. Intelezi iyavikela futhi nakubakhunkuli abakhunkulayo kanye ke nasekudumeni kwezulu lapho khona umnumzane eyisebenzisela ukuvikela umuzi wakhe. Intelezi yakhiwa ngamagxolo amanzi ezihlahla kanye nezimpande zazo, kokunye kubuye kusetshenziswe amaqabunga azo izihlahla kanye nezigaxa zemithi.
Ubulawu umuthi wokuphalaza osetshenziswa ukugeza igazi, ukhiphe izindenda esifubeni kumuntu ocinene, ubuye futhi ukhiphe inyongo nesidina kumuntu athandeke ebantwini, abe negazi elihle. Ubulawu busetshenziswa kakhulu ngamabhungu nezintombi kodwa ke awukhethi iphela emasini ngoba nabadala bayawusebenzisa. Imithi esetshenziswa ebulawini iyehlukana ngokomsebenzi wayo kulowo ozoyisebenzisa.
Kuthakwa amakhambi ahlukahlukene okhambeni lawo, lolukhamba lubekwa emsamo endlini ezothile okungangeni noma ngubani kuyo. Uma uphalaza ngawo, uwuphehla ngobhaxa lephahla kuze kuqubuke ingwebu emhlophe ehubuluzwa yilowo ophalazayo, aphinde akhwife ngayo phandle ekhipha amashwa. Uma esekhwifile ngawo, uwugalela esiswini wonke eseyophalaza phandle, yikhona ubulawu buzophuma nesinyama asikhiphayo kanye nesidina.
3 thoughts on “Izimbiza, izintelezi nobulawu (Ingxenye yokuqala)”
Kusho ukuthini ukuphupha ngathi usontwa intamo
Wazi kanjani ukuba ngoku uyathwasa